Thit Htoo Lwin: 5/29/11 - 6/5/11
19/05/13 - 26/05/13 (107)
အဆိုတော် အာဇာနည်၊ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်၊ မျိုးကျော့မြိုင် နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ မြေး နေရွှေသွေးအောင်
အာဇာနည် အခြောက်ကြီး ဖြစ်သွားပြီလား
6/04/2011 05:32:00 PM
BG သွေးအကူအညီပေးရေး အဖွဲ့၏ လှုပ်ရှားမှု သတင်း၊ ဓာတ်ပုံများ...
Posted: 03 Jun 2011 01:37 PM PDT
သွေးအကူညီပေးရေးမှ ၁၉ရက်(၆)လ၂၀၁၁တွင် ကျရောက်မည့် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ (၆၆)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အကြို သွေးလှူဒါန်းပွဲအား ၁၄.၆.၂၀၁၁မှ စတင်ပြီး စုပေါင်း သွေးလှူဒါန်းမည် ဖြစ်ပါသောကြောင့် ပူပေါင်းပါဝင်လိုသူများ၊
6/04/2011 04:54:00 PM
အာရပ်လို တော်လှန်ရေးမျိုး မြန်မာပြည် ကြုံနိုင်ဟု ဂျွန်မက်ကိန်း သတိပေး
ကိုပေါက် | သောကြာနေ့၊ ဇွန်လ ၀၃ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၆ နာရီ ၃၈ မိနစ် နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ မြန်မာအစိုးရ အနေဖြင့် စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး သန္နိဋ္ဌာန်မရှိလျှင် အာရပ်ကမ္ဘာလို တော်လှန်ရေးမျိုး ကြုံတွေ့ရနိုင်ကြောင်း အမေရိကန် ဆီးနိတ်အမတ် ဂျွန်မက်ကိန်းက
6/03/2011 06:19:00 PM
McCain warns Myanmar it risks Arab-style uprising
June 3, 2011 7:01 a.m. EDT
John McCain (CNN) -- U.S. Senator John McCain warned Myanmar's new military-backed government to make democratic reforms or possibly face the type of revolution that has swept through Arab nations.
"The winds of change are now blowing, and they
6/03/2011 05:54:00 PM
by Zay Ya on Thursday, May 19, 2011 at 5:34am
“နှစ်လရာသီ ခါနာရီ ရွေ့ပေမယ့် အာဇာနည်နေ့ ကိုဖြင့် မမေ့သင့် ပါပေ။ ယနေ့ဖြင့် အသိတရား ထားဖို့ အခြေ အများ ပြည်သူတွေ အများ ပြည်သူတွေ အာဇာနည်နေ့ ကိုလေ တွေးရှု ကာပဲ အလေးပြု ပါတယ်လေ”
6/03/2011 11:15:00 AM
ဂျွန်မက်ကိန်း နှင့် NLD ခေါင်းဆောင်များ ဓါတ်ပုံ အယ်လ်ဘမ်
Myanmar prisoners' hunger strike worries Suu Kyi
Updated 10:31 a.m., Thursday, June 2, 2011
YANGON, Myanmar (AP) — Myanmar pro-democracy leader Aung San Suu Kyi
6/03/2011 10:31:00 AM
ဂျွန်မက်ကိန်း နေပြည်တော် သွားရောက်လည်ပတ်တဲ့ ရုပ်သံ (ဗွီဒီယို)
6/03/2011 09:46:00 AM
ပြည်နယ်ဝန်ကြီး တချို့ အလုပ် လက်ကိုင်မရှိ ဖြစ်နေ
ချင်းပြည်နယ် အစိုးရမှာ ၀န်ကြီးနေရာတွေ ရရှိထားကြတဲ့ ချင်းပါတီ (၂) ခုက ၀န်ကြီးတွေဟာ ဌာန အလုပ် လုပ်ကိုင်ခွင့် မရသေးသလို တချို့ဟာ တာဝန်ယူရတဲ့
ဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ ဌာနတွေ ထည့်သွင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ ချင်းအမျိုးသားပါတီ CNP က ရွေးချယ်ခံရတဲ့ ပူးရာမာန် ကို စီးပွားရေး ၀န်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ပေးထားပေမဲ့ သူရဲ့ဌာနအောက်မှာ ဘာမှ မသက်ဆိုင်တဲ့ အား ၊ကာ ခေါ် အားကစားဌာန ကို ထားရှိထားတယ်လို့ 
6/02/2011 10:28:00 AM
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဈေးနှုန်းများ ရက်ပိုင်း အတွင်း ကျပ် ၈၀၀ အောက်သို့ ကျဆင်း
Thursday, 02 June 2011 00:29 အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဈေးနှုန်းများ ဆက်တိုက် ကျဆင်းနေပြီး ဇွန်လ တစ်ရက်နေ့မှစ၍
တစ်ဒေါ်လာလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ကျပ် ၇၈၀ အထိ ကျဆင်းသွားကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
''ဒေါ်လာဈေးတွေ ဒီတစ်ပတ် ဆက်တိုက် ကျလာတယ်။ ကျပ် ၈၂၀ လောက်ကနေ တစ်နေ့ချင်း၊ တစ်နေ့ချင်း ကျဆင်းနေတာ အခု ကျပ် ၇၈၀ ပဲ ရှိတယ်။ အခု ပြောနေတာက ကျပ် ၇၅၀ လောက်အထိ သစ်ထူးလွင်
6/02/2011 08:20:00 AM